Autism (အော်တစ်ဇင်) : ရောဂါလက္ခဏာတွေ၊ ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေနဲ့ ကုသမှုတွေအကြောင်း Hello Sayarwon
သွေးနီဥများရဲ့ အရွယ်အစားဟာ ပုံမှန်ရှိသင့်တဲ့ အရွယ်ပမာဏထက် သေးငယ်နေတဲ့အတွက် သူတို့လုပ်ကိုင်ရမယ့် တာဝန်များကို မဆောင်ရွက်နိုင်ရင်လည်း သွေးအားနည်းတတ်ပါတယ်။
သွေးရောဂါများ, သွေးအားနည်းရောဂါများ အောက်တိုဘာ 12, 2020 .2mins read
အရေပြား ယားတာက တော်တော်လေး ခံရခက်တဲ့ ကိစ္စပါ။ အရေပြားက ယားတယ်။ ဆေးလည်း မသောက်ချင်ဘူး။ ဆေးလည်း မလူးချင်ဘူးဆိုရင်တော့ အရေပြားယားတာ သက်သာစေဖို့ ဘာတွေစားရမလဲ။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, ထူးခြားသည့်စားသောက်မှုပုံစံကွဲများ စက်တင်ဘာ 15, 2020 .2mins read
ကျောက်ကပ်ရောဂါဟာ ဆီးချိုရောဂါကို ခံစားနေရသူတွေအတွက် အဆိုးဆုံးကြုံနိုင်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆီးချိုနောက်ဆက်တွဲ ကျောက်ကပ်ထိခိုက်တတ်ပါတယ်။
ဆီးချို သွေးချို, ဆီးချိုရောဂါ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာများ စက်တင်ဘာ 3, 2020 .2mins read
ဆီးထဲအချိုဓာတ်များတာ ကြောက်စရာလား ကျောက်ကပ် ဆီးချိုရောဂါ ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဆီးမထိန်းနိုင်ဖြစ်ခြင်း လည်ပင်း အနာကျက်နှေး အမြင်အာရုံ
ဆီးနှင့်ကျောက်ကပ်ကျန်းမာရေး, အခြားဆီးလမ်းကြောင်းပြဿနာများ ဇူလိုင် 23, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် စက်တင်ဘာ 15, 2021 .3mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇန်နဝါရီ 14, 2021 .2mins read